स्तनले नाप्ने महिलाको सौन्दर्य ? | NewsKarobar
गृहपृष्ठ स्तनले नाप्ने महिलाको सौन्दर्य ?
चलचित्र समाजको बिम्ब प्रस्तुत गर्ने साधन हो । चलचित्र, टेलिफिल्म, गीतहरू भनेको सामान्य मान्छेले पनि सरल र सहज तरिकाले समाज बुझ्ने र केही चेतना लिने माध्यम हो । संस्कार, संस्कृति, इतिहास, समाजको चित्र पढेर त्यहाँ भइरहेका विभेदलाई न्यायमा बदल्ने सन्देश दिने चित्र हो चलचित्र । त्यसैले यसका पात्रहरूले समाजमा भइरहेका नराम्रा घटनाको खण्डन गरेर राम्रो बन्ने सन्देश दिनुपर्छ । तर, केही समययता त्यस्तो देख्न पाइएको छैन ।
चलचित्र हेरेर र गीत सुनेर सामान्य मान्छेको चेतनामा कति प्रभाव पार्दै फरक बन्छ भन्ने मुख्य कुरा हो । तर, हिजोआजका चलचित्र हेर्दा टिपिकल बन्न मनलाग्दी छाडा शब्द धेरै बोलेको पाइन्छ । एउटा पुरूष महिलालाई जिस्क्याउने, अपमान गर्ने सिन सुरूमै हुन्छ र ताली मज्जाले बज्छ । तर, महिला किन त्यो अपमानलाई अस्वीकार गर्न सकिरहेका छैनन् ?
हिजोआजका चलचित्रमा महिला उपभोगको साधन हो भनेर मज्जाले प्रस्तुत गर्ने देखिन्छ । महिलालाई होटलको कोठामा लगेर किस्ता–किस्तामा कपडा खोलेर संसारभर महिलालाई हामी यसरी लुट्छौं भनेर खुलेआम पुरूष सम्मानित भएको हुन्छ । बालात्कार गरेको देखाइन्छ तर महिला चुपचाप हुन्छिन् । म महिला र यो सहनुपर्छ भनेको भाव देखाएन्छ । सँगै पुरूषले त्यसो गर्दा केही समयमै पुरूषले फकाएपछि खुसी भएको पनि देखिन्छ ।
तर माया, स्नेह, यौन सम्बन्धलगायतमा महिला पुरूषको बराबरी इच्छा र सामीप्य भन्ने किन बिर्सन्छन् ? तर, महिला यो कुरामा कत्ति दुःखी छैनन् । बरू खुसी पो देखिन्छन् । कथावस्तुभन्दा पहिले ‘कोकोकला फिगर,’ ‘सेक्सी लुक्स’ भएको कुन महिला कलाकारलाई लिँदा चलचित्र बढी चल्छ, त्यतातिर मात्र केन्द्रित छ । शरीरको आकर्षण र लभ स्टोरीभन्दा बढी ऊसँग भएको क्षमतालाई पहिलो प्राथमिकता किन दिइँदैन ?
लभ स्टोरी हुनुपर्छ ठिक हो तर मायाको नाममा जीवनसँग कत्ति मेल नखाने कुरा ठिक छैनन् । लभ परिसकेपछि पुरूषको शासनमा रहनैपर्ने देखाइन्छ । होइन भने भट्टीमा महिलालाई विभिन्न नामले जिस्क्याउँदै भोलिपल्टबाट रक्सी पिएर, मातेर चुपचाप बसेकी श्रीमती कुटेको देखाउने कति जायज र चेतनामूलक सन्देश हो ? यति मात्र कहाँ हो र ! अश्लील शब्दहरू प्रयोग गरेर गाली गर्दै र पुरूषत्व देखाउँदै कोठाबाट लछार्दै घरबाहिर निकालिएको देखाइन्छ किन ?
साँच्चै योभन्दा बढी हैसियतका चलचित्र बनाउन नसकेको कि चलचित्रमा काम गर्ने र हामी सामान्य जनताको यसभन्दा माथिको समाज बनाउने परिवर्तनको सम्भावना मरेको ? हिजोआज घरघरमा टिभी हेरेर सामान्य बच्चाले सिको गर्छन् । महिला कुटेर बहादुरी देखाउनुपर्छ भनेर सानो छोराले सिक्छ । छोरीले सौन्दर्यको नक्कल पहिले सिक्छन् । क्रमशः छोरी हुँदाका अपमान, गालीगलोज र पुरूषको ईशारामा चलाने बन्नुपर्ने रहेछ भनेर सिक्छन् । केही राम्रा कुरा होलान्, नभएका होइनन् । मुख्य कथा कता केन्द्रित छ भन्ने हो ।
महिलाहरू ‘घाँटीभन्दा तल त राम्री नै छे’ भन्ने मालसमान हो ? यस्ता गीतले के सिकाउँछन् ? मलाई लाग्छ यस्ता गीतहरू ब्यान्ड हुनुपर्छ !
हामी सानै हुँदा एनटीभीमा आउने जूनकिरी टेलिफिल्म हेरेर छोरीलाई स्कुल पठाएका उदाहरण थिए । तर, राम्रो सन्देश पहिले सिक्ने चलचित्र निर्माणमा निर्माताको ध्यान पुगोस् । यही नै तरिकाले मात्र चलचित्र अघि बढ्ने हो भने समाजलाई अगाडि भन्दा पछाडि धकाल्ने काम हुन्छ ।
हिजोमात्र भाइबैनीसँग बसेर चलचित्र हेर्दै थिएँ । रिमा विश्वकर्माको अभिनय भएको गीत आयो । कस्तो रहेछ भनेर मैले पनि सुनेँ । गीतहरू यस्तासम्म बन्छन् र त्यो गीतमा अभिनय उनले गर्छिन् भन्ने मलाई विश्वास थिएन । महिलाको चेतनाको कुरा आउनुभन्दा पहिले शारीरिक सौन्दर्यको कुरा आउँछ । पुँजीवादी महिलाको अंग-अंग नापेर वस्तु बनाइरहेको छ । जहाँ जहिले पनि सजिलै उपभोग गर्न पाइने होस् । यो कुराले धेरै पुँजीवादी महिलालाई छोएको देखिँदैन, बरू अंग प्रदर्शनले पैसाको बार्गेनिक गरेको देखिन्छ ।
गीतमा महिलालाई बुझ्न रिमालाई देखाएर केटी कस्ती छे ? भन्दा ‘घाँटीभन्दा तल त राम्री नै छे’ भनेर महिलालाई बुझ्ने पुरूषको उपभोक्तावादी सोच देखिन्छ । ‘द झोले प्रोडक्सन’को ‘अर्जुन पान्डे’को स्वरमा भएको गीतमा रिमाले यति खुसी भएर अभिनय गर्दा साँच्दै त्यो स्तरको बुझाए र हैसियत भएका महिलालाई पनि केही नहुने हो त ! भन्ने सोच्न बाध्य बनायो । साँच्चै महिला शरीरले मात्र राम्रा हुन् ? रिमा यो अभिनय गर्दा साँच्चै खुसी छिन् ? उपभोग गर्ने शरीरबाहेक महिलाको अरू कुनै काम छैन भन्ने गीत बन्दा बन्द गर्न माग गर्नुपर्ने सचेत रिमा यसरी नाच्दा महिलाको धरातलले निकै मन छोयो । महिलामाथि यति अपमान हुने गीत बनाउनेलाई प्रश्न गर्नुको सट्टा किन नाच्छन् ? यो गीतबाट रिमालाई महिलाको अपमान भएको महसुस भएको छ कि छैन होला ?
यसरी नै जाने हो भने महिला वस्तु बनेर शरीर उपभोगका लागि हो, महिलाको काम यति हो भनेर कसरी सहनु ? तर, यो कुरामा महिलाको ध्यान किन जाँदैन र आफ्नै विवेकले प्रश्न किन गर्दैनन् ? पुरूषबाट मात्र महिला स्वतन्त्रताको कल्पना गर्ने र यसैगरी नाचिरहने हो भने महिलामुक्ति समभव छ ? पुजीवादले महिलालाई सुनको पिँजडामा थुन्छ तर महिला त्यो पिँजडाको सुन मेरै हो भनेर बस्दा सुनको आकर्षणले पिँजडामा जिन्दगीको अन्त्य हुन्छ । महिलाको सौन्दर्य शारीरिक सौन्दर्यभन्दा माथि नजाँदासम्म महिलाको विकास र पहिलो प्राथमिकतामा पर्न सफल विचार र बुद्धि कहिले हुँदैन ।
पछिल्लाे - खर्च चाहिएको छ
अघिल्लाे - मुक्तिनाथ बैंकको आकर्षक ब्याजदरमा आवास र सेयर कर्जा